हृदयघात भएको २४ घण्टा पछि बीपी पुग्दा पनि जोगियो ज्यान
हृदयघात भएको २४ घण्टा पछि बीपी पुग्दा पनि जोगियो ज्यान डिस्चार्ज भएपछि उपचारमा संलग्न डा.प्रशान्त साहलाई सम्मान
१६८८३ पटक पढिएको
धरान : भोजपुर षडानन्द ९, दिङ्लाका ४५ बर्षीय भिमबहादुर तामाङलाई असोज ४ गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको लागि ल्याइपुर्याउदा उनलाई हर्ट अट्याक(हृदयघात) भएको २४ घण्टा बितिसकेको थियो ।
हृदयघात भएपछि जतिसक्दो चाडो अस्पताल पुर्याउनुपर्छ । भोजपुरको दुर्गम ठाउँबाट धरान पुग्दा धेरै समय लागेको थियो । बीपी आइपुग्दा तामाङको होस पनि राम्रो थिएन । डा.प्रशान्त साह र उनको टिम उपचारमा जुट्दा तामाङको ज्यान बचाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने निश्चित थिएन । डा.साहका अनुसार उनको मुटुको धडकन २० मात्र थियो भने फोक्सोमा पानी जम्न थालिसकेको थियो । अक्सिजनको मात्रा पनि ज्यादै कम थियो । परिवारका सदस्यहरु काठमाण्डौं वा दिल्ली लैजादा पो हुन्छ कि भन्दै थिए । यो अवस्थामा त्यता पठाउन पनि सम्भव थिएन ।
हर्ट अट्याक भएर आएकाहरुमध्ये १५ प्रतिशतको उपचारको क्रममा नै ज्यान जाने गरेको छ । तामाङ त झन् जोखिम अवस्थामा आइपुगेका थिए । डाक्टरलाई पनि उनलाई बचाउन सकिएला कि नसकिएला भनेर भन्न गाह्रो थियो । तिनै मुटुका विरामी तामाङ बुधबार भने सकुशल भेटिए । त्यतिमात्र होइन, उनी नर्मल व्यक्ति झै हिडडुल गर्न सक्ने भएपछि अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए । बच्छ कि बच्दैन भन्ने अवस्थाबाट उपचारपछि सामान्य भएका तामाङ र उनका परिवारले बुधबार डिस्चार्ज भएपछि तिनै डाक्टर प्रशान्त साहलाई क्याथ ल्याबमा भेट्न पुगे । जसले ससुराली जादै गरेको अवस्थामा पनि फर्किएर तामाङको उपचारमा जुटेका थिए । उनले विरामी र उपचार सेवामा पुर्याएको समर्पण भावकै कारण तामाङको ज्यान जोगिएको थियो । तामाङ र उनका परिवारले डा.साहलाई घर फर्किनुअघि बुधबार सम्मान गरे ।
मुटु रोगी तामाङ र उनका परिवार, आफन्तजनले डा.साहलाई खादा ओढाएर धन्यवाद दिए । मायाको चिनो स्वरुप बुद्धको प्रतिमा पनि प्रदान गरे । ‘म बच्छु भन्ने आशा कसैलाई थिएनछ, उहाँ मेरो लागि भगवान भन्दा पनि ठुलो व्यक्ति भएर आइदिनुभयो, यो गुन म यो जुनि मात्र होइन, कयौं जुनिसम्म म र मेरो परिवारले विर्सने छैन,’सम्मान गर्दै तामाङले भने,‘म उहाँको फोटोलाई ठुलो बनाएर घरमा राख्छु, र गाउँभरि प्रचार गर्छु । यहाँ यस्तो राम्रो उपचार हुदो रहेछ ।’
डा. साहका अनुसार तामाङको मुटुमा रगत लैजाने धमनी सतप्रतिशत ब्लक भएको थियो । मुटुमा कृत्रिम पेसमेकर राखेर आफु र आफ्नो टिम निरन्तर उपचारमा जुट्दा र भगवानको कृपाले गर्दा पनि तामाङ बच्न सफल भएको डा.साहले बताए । ‘हाम्रो टिमको निरन्तरको प्रयास र भगवानको कृपाले पनि उहाँलाई बचाउन सक्यौं, अहिले धेरै सुधार भयो र अवस्था नर्मल छ,’डा.साहले भने,‘यो उहाँ र परिवारको लागि खुशीको कुरा हो, हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो ।’ डा. साह भारतको एम्सबाट कार्डियोलोजीमा डि.एम. कोर्ष गरेर आएका बिशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । उनी एम्समा पढेर आएपछि प्रतिष्ठानले विगत ३ बर्षदेख एनजिओग्राफी, एनजिओप्लाष्टिकलगायत उपचार सेवा दिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा ओपन हर्ट(वाइपास) सर्जरी सेवा पनि भइरहेको छ । डा.लोकेश जैयसवालले वाइपास(ओपन हर्ट) सर्जरी गर्छन् । जसले गर्दा अब पुर्वका मुटु रोगीहरु काठमाण्डौं, दिल्लीतिर उपचार गर्न जानुपदैन । ‘मुटुको लागि सबै सेवा हामी बीपीमा नै दिन्छौं, काठमाण्डौं, दिल्लीतिर जानुपर्दैन,’उनले भने ।